နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Pauk Kaya Eighties... ပေါက်ကရ ရှစ်ဆယ်များ...။ (၁)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 8:51 PM
ကိုပေါ June 16, 2008 at 10:28 AM
ကိုသန့်စင်…….ဆိုတာ တီဇက်အေကို ပြောတာလားဟင်….။
ပီနန်ဘက်က အိမ်သာတချို့ဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ အိမ်သာထဲမှာ နာဂစ် ၀င်မွှေသွားသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ရေတွေလျှံနေတာ။ ရေထဲမှာ စီတန်း ချထားတဲ့ အုတ်ခဲတုံးလေးတွေပေါ်ကနေ တရုတ်နဂါး ကသလို သိုင်းကွက်နဲ့ နင်းသွားရတယ်။ တုံး..တုံးလုံးချမ်…တုံးချမ်…တုံးချမ်…ပေါ့ဗျာ။
Ko Boyz June 16, 2008 at 10:46 AM
ကိုသန့်စင်ဆိုတာ သန့်စင်ခန်းကို လူကြားကောင်းအောင် ကိုသန့်စင်နဲ့ သွားတွေ့မယ် ပြောတာ...။ နောက်တစ်မျိုး ရှိသေးတယ်...။ ဒါကျတော့ ယောက်ျားလေးများနဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ အရေးပေါ့။ ကျားသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် သဘောပေါက်...။
၁။ ကိုသန့်စင်သွားတွေ့မယ်က Apply to all sex.
၂။ ကျာသးသွားကြည့်မယ်ဆိုတာက Apply only to male...
Freshup June 16, 2008 at 10:42 PM
ကျွန်တော့်တုန်းကလည်း အဲလိုပါပဲ… ကိစ်စ ၀ိတ်စ ပြီးပြီဆိုတော့ မှ သန့်စင်ဖို့ hand shower လေးက လုံးဝကို ရှိမနေဘူး။ တော်တော်လေး အကြပ်ရိုက်သွားတယ်.. ဒါပေမဲ့ ရေးချိုးခန်းနဲ့ ကတွဲရက်ဖြစ်နေတော့ ရေချိုးခန်းက ရေချိုးတဲ့ hand shower ကိုပဲ အိမ်သာ hand shower အဖြစ်သုံးလိုက်တယ်ဗျာ ဟီးဟီး.. ရှက်လို့ဘယ်သူ့မှတောင်မပြောဖူးပါဘူး ခုမှလူစုံလို့
မလေးလူမျိုးများဟာ အိမ်သာမှာ ရေသုံးပုံမပေါ်တဲ့ အပြင် မျက်နှာသစ်တဲ့ ဘေဇင် ထဲကိုလဲ ခြေထောက်ထည့်ပြီး ဆေးတတ်ကြပါသေးတယ်… ရိုးရာလားဘာလားတော့မသိဘူး
Ko Boyz June 16, 2008 at 10:47 PM
ဟုတ်တယ်...။ နောက်ဆုံး ပြန်လာခါနီး မနက်မှာ မျက်နှာသစ်နေတုန်း ဘေးနားက မျက်နှာသစ်တဲ့ ဘေစင်ထဲကို ခြေထောက်ဆေးနေတာ တွေ့လို့ ငါဒီမှာ မျက်နှာသစ်နေတာ မမြင်ဘူးလားလို့ ကောလိုက်သေးတယ်...။ ဟီဟိ... သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်လဲ မတတ်နိုင်ဘူး...။
. June 17, 2008 at 3:47 AM
'In Wudhu, we wash or moisturize the nerve-ends of the hands, feet, hair, mouth, nose and ears.'
ThuHninSee June 17, 2008 at 3:34 PM
အလုပ်တူတူလုပ်ဖူးတဲ့ မလေးမလေးတွေက အလုပ်က အိမ်သာမှာ ရေခွက်လေးတွေတောင် ဆောင်ထားတယ်နော်။
Moeminthar September 13, 2008 at 5:24 PM
ဘာသာရေးလို့ ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကျနော် KL မှာ နေတုန်းက မွတ်စ်လင်ဘာသာဝင်တိုင်း ပလီ မတက်ခင်မှာ ကိုသန့်စင်စီလာကြပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ခြေထောက်ဆေးပြီဆိုလျှင် ခြေထောက်တစ်ဘက်ကို မျက်နှာသစ်ခွက်ထဲ ထည့်ပြီး တစ်ပေါင်ကျိုး ပို့စ်နဲ့ ဆေးပါတယ်။ အထူးသဖြင် Ramadan ကာလ မှာ ပိုတွေ့ရပါတယ်။
Muriel September 22, 2008 at 1:12 AM
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ... အိမ်သာအကြောင်းကို အသေးစိပ်အကျယ်ဖွင့်ထားတယ်။ ဟားဟား။
Ko Boyz September 22, 2008 at 9:19 PM
အခု အင်ပီရီရယ်ဟိုတယ်မျာ ရေပန်း တပ်ထားပေးတယ်...။ မြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ မလေး သို့မဟုတ် မြန်မာ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်ယောက်က ဒိဘလော့ဂ်ဖတ်ပြီး သွားပြောထားလို့ ထင်တယ်...။